Sidee Xaqiiqda Kordhiyey u Saameyn ku yeelaneysaa Suuqgeynta Saameeyayaasha? | Martech Zone
COVID-19 wuxuu bedelay habka aan wax u adeegsanno. Iyada oo musiibo ba'an ay ka jirto banaanka, macaamiisha ayaa doorbidaya inay sii joogaan oo ay ka iibsadaan sheyga khadka tooska ah. Taasi waa sababta macaamiisha ay ugu sii kordhayaan saamileyaasha wax badan oo ka mid ah sida loo duubo fiidiyowyada wax kasta oo ka yimaada isku dayga lipstick-ka ilaa ciyaarista fiidiyowyada aan ugu jecel nahay. Wixii dheeraad ah ee ku saabsan saameynta masiibada ee suuq geynta saamileyda iyo qiimaha, eeg daraasaddeena ugu dambeysay.
Laakiin sidee buu uga shaqeeyaa waxyaabahaas ay tahay in loo arko in la rumaysan karo? Iibsashada lipstick-ka aad tijaabisay dukaanku waa qaylo dheer oo ka fog dalbashada aragga aan la arkin. Sideed ku ogtahay inay u ekaandoonto wajigaaga kahor intaadan iibsan? Haatan waxaa jira xalka oo saameynayaashu waxay na tusayaan habka leh madadaalo, dhab ah, iyo waxyaabo madadaalo leh.
Waqtigaan la joogo, waan wada aragnay xaqiiqada jirta (AR) qaab ahaan. Waxaad u badan tahay inaad dareentay saamileyaal la wadaagaya fiidiyowyo iskood ah oo xiran dhagaha iyo sanka yar ee yar, ama filtarrada da'da wejigooda. Waxaad xusuusnaan kartaa dhowr sano ka hor markii qof kastaa taleefannadiisa u adeegsanayay inuu ku eryado jilayaasha Pokemon magaalada oo dhan. Taasi waa AR. Waxay qaadataa sawir kumbuyuutar soo saaray oo ku dhajinaya taleefankaaga, sidaa darteed waxaad arki kartaa Pikachu oo hortaada taagan, ama beddeli kara qaabka wejigaagu u muuqdo. AR horeyba caan ayey uga ahayd baraha bulshada qiimaheeda madadaalo darteed. Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo suurtagal ah oo ku saabsan adduunka ecommerce. Kawaran haddii aad ku arki lahayd lipstick-ka wajigaaga adigoon ka kicin sariirtaada? Kawaran haddii aad ku tijaabin lahayd muuqaalo ka duwan raaxada iyo amniga gurigaaga, ka hor intaadan xitaa gaarin kaarka deynta? Iyada oo la adeegsanayo 'AR', waad sameyn kartaa intaas oo dhan iyo in ka badan.
Noocyo badan ayaa ku boodaya tikniyoolajiyaddan, oo la filayo inay sii fiicnaato. Laga soo bilaabo qurxiyo ilaa ciddiyaha ilaa kabaha, suuqleyda waxay helayaan habab cusub oo cusub oo looga faa'iideysan karo tikniyoolajiyadan xiisaha badan. Halkii aad ka maqli lahayd dhagaha yaryar ee yaryar, waxaad isku dayi kartaa muraayad cusub ama laba iyo toban. Halkii qaanso roobaad iyo daruuro dul sabeynaya madaxaaga, waxaad isku dayi kartaa midab timo cusub oo cabbir ahaan ah. Xitaa waad ku lugeyn kartaa socodka laba kabood oo isboorti dalwad ah. Muuqaalladuna way sii kordhayaan si macquul ah markasta.
Isku dayga Virtual
Isku dayga ficil ahaaneed, sida isbeddelkan cusub loogu yeero, waa baashaal waxaana laga yaabaa in yar oo balwad u ah macaamiisha celceliska ah. Qiyaastii 50 milyan oo isticmaaleyaasha shabakadaha bulshada ayaa isticmaali doona AR sannadka 2020. Marka door intee le'eg ayay saameyn ku yeelan karaan kuwaan oo dhan? Marka ugu horeysa ee la bilaabo, iskudaygooda gaarka ah waxay gaarayaan boqolaal milyan oo taageerayaal ah oo ku jira warshadaha moodada iyo qurxinta, iyagoo macaamiisha ugu kaxeynaya toos barnaamijyada ay jecel yihiin si ay naftooda ugu ciyaaraan. Noocyada aan wali qabsanin AR-ga ayaa wali is arki doona iyaga oo khasaaro ku ah maaddaama kuwa saameyn ku leh ay u diraan kuwa raacsan koox-koox si ay ugu tijaabiyaan tikniyoolajiyadda ugu dambeysa
Maaddaama tiknoolajiyada AR ay hagaageyso, saameyntu xitaa uma baahnaan doonaan inay lahaadaan shey dhar ah si ay u muujiyaan sida ay u eegi doonaan, taas oo macnaheedu yahay waxyaabo badan oo ku jira xawaare dhakhso leh. Qiyaas fursadaha sida saameynayaashu isugu imaanayaan bandhigyo moodle ah oo toos ah. Dhacdooyinka waaweyn ee internetka ayaa laga abuuri karaa fikradda koox saameyn ku leh isku dayaya isla labbiska si loo muujiyo sida ay uga muuqan doonaan qaabab kala duwan iyo cabbirro jidheed. Dhammaantoodna waa la abaabuli karaa iyada oo midkoodna weligiis ka bixin qolalka uu ku nool yahay.
Laakiin mood-yada iyo quruxda isku day-ons ma aha isticmaalka kaliya ee loo isticmaalo AR. Iyada oo ah qalab demo oo awood leh, AR ayaa jawaab u ah dadka wax saameynaya si ay u soo bandhigaan alaabooyinka runtii u baahan in lagu daawado fiidiyowga. Tani waxay macnaheedu noqon kartaa muujinta isticmaalka saxda ah ee alaabada daryeelka timaha, laakiin waxay sidoo kale u sii gudbi kartaa meelaha sida warshadaha ciyaaraha, sida muujinta ciyaaraha fiidiyowga. Warshadaha guryaha, IKEA waxay bilaabaysaa barnaamij la yiraahdo IKEA Place, kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala inay ku tijaabiyaan alaab guri oo kala duwan guryahooda ka hor inta aysan iibsan, ku dhejin gurigooda, una aadin dadaalka ah inay wada dhigaan.
U fiirso dhacdooyinka khadka tooska ah ee saameynayaashu ay ku tusayaan sida loo sameeyo adoo booqanaya guryahooda isla markaana sameeya codbixin toos ah oo ku saabsan miiska cusub ee la dhigayo qolalkooda. Waxaa jira meel aad u badan oo loogu talagalay hal-abuurka maaddaama tiknoolijiyada ay soo ifbaxeyso.
Waxaan horeyba u ognahay in Youtube ay ku qarxisay fiidiyowyo ka imanaya saamileyaal maaddaama kuwa raacsan ay jecelyihiin noocyo cusub oo maadooyin ah. Ku dhowaad shan bilyan oo fiidiyow ayaa laga daawadaa Youtube maalin kasta in ka badan 30 milyan oo daawadayaal ah. AR aasaas ahaan waa horumarin xagga qaabka ah. Waa jiilka xiga ee xayeysiinta. Iyo sida fursadaha AR ay u fidinayaan xitaa ka baxsan suuqgeynta codsiyada adduunka dhabta ah sida waxbarashada iyo barashada shirkadaha, farsamada ayaa sii wadi doonta inay ka sii fiicnaato. Noocyada ugu dhakhsaha badan ayaa ka faa'iideysanaya waxa ay u leeyihiin iyo saamaynta saamaynta ay u samayn karto iyaga, sida ugu wanaagsan ee ay noqon doonaan.
Si aad wax badan uga barato suuq geynta saamaynta x AR iyo sida ay ugu gudbin karto astaantaada heerka xiga, waad nala soo xiriiri kartaa oo qof ka tirsan kooxdeena ayaa gaari doona 24 saacadood gudahood.
La xiriir A&E
Ku saabsan A&E
A&E waa hay'ad dijitaal ah oo leh tan ugu weyn faylalka tacliimeed oo ka mid ah shirkadaha Fortune 500 sida Wells Fargo, J&J, P&G, iyo Netflix. Aasaasayaasheenna, Amra iyo Elma, waa saamileyaal waaweeyn oo ay la socdaan in ka badan 2.2 milyan taageerayaal bulsheed; ka eeg wax badan oo ku saabsan A&E on Forbes, Telefishanka Bloomberg, Financial Times, Inc., Iyo Ganacsiga Gudaha Video.
Tags: a & eAmra iyo Elmaarxaqiiqda la kordhiyaybeautyfashionmeel ikeasuuqgeynta suuqgeyntaisku day tijaabiyeisku day tijaabo ahisku day tijaabo ahyoutube